डी मारियाले गरे मेस्सीको प्रशंसा !! यसरी ब्यक्त गरे बार्सिलोना जाने चाहना बारे !! - Experience Best News from Nepal
डी मारियाले गरे मेस्सीको प्रशंसा !! यसरी ब्यक्त गरे बार्सिलोना जाने चाहना बारे !!
पुर्बी म्यानचेस्टर युनाइटेड तथा अर्जेन्टिनी फुटबलर एन्जेल डी मारियाले आफ्ना राष्ट्रिय टिम साथी लिओनेल मेस्सीको प्रशंसा गरेका छन् ।
थोरै मध्यका फुटबलर जो हाल विश्व उत्कृस्ट खेलाडी लिओनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोसंग मैदानमा संगै खेलेका छन् त्यस मध्यका एक हुन डी मारिया । उनले आफ्नो राष्ट्र मार्फत मेस्सीसंग मैदान साझेदारी गर्छन भने रोनाल्डोसंग मड्रिडमा एकै टिममा खेल खेलेका थिए ।
डी मारिया लिओनेल मेस्सीका समेत असल मित्र हुन, उनले हालै लिओनेल मेस्सीको बारेमा प्रतिक्रिया दिदै मेस्सीको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । मड्रिडमा भएको रोनाल्डोसंगको साझेदारी विर्सिदै मेस्सीलाई आफ्नो प्रमुख मान्दै डी मारियाले प्रशंसा जनाएका छन् । ओले अनलाइनका अनुसार डी मारियाले आफुलाई मेस्सीसंग खेल्नु निकै मन पर्ने साथै मेस्सीले खेलेको देख्दा निकै राम्रो लाग्ने बताउछन । मेस्सीको ट्रेनिंग खेलसमेत मन पर्ने बताएका छन् ।
उनि भन्छन : मेस्सीको खेल निकै अद्वितीय छ र उनको खेलको बयान म गर्न सक्दिन !! म बार्सिलोना जाने बारे निकै सम्भबनाहरु थिए तर हुन सकेन, मेरो बार्सिलोना जानु मुख्य उदेश्य मेस्सीलाई हेर्नु देख्नु र खेल्नु हो ।
साथै उनि भन्छन : मड्रिडसंग मेरो सम्झौता अनि सम्बन्ध तोडी सकेको छ र मेरो निम्ति बार्सिलोना चाहना हो ।
च्याम्पियन लिगले छुट्याएको मेस्सी, रोनाल्डो र एम्बाप्पेको उत्कृस्टता
मेस्सी र रोनाल्डोमा को ठुला फुटबलर ?? ३८0,000 फुटबल प्रशंसकले दिए मतदान !! नतिजा??
मेस्सी र उनको पत्नीको १० बर्ष अघिका तस्बिर इन्टरनेटमा भाइरल